Sida Looga Hortago Kansarka Naasaha Ku Dhaca. | Hargeysa World~Herald
Sida Looga Hortago Kansarka Naasaha Ku Dhaca.
OpinionSida Looga Hortago Kansarka Naasaha Ku Dhaca.
Kansarka naasaha ku dhacaa, waa nooc kamid ah kansarka dhibaaatda caafimaad ku haaya haweenka. Waa xanuunka ugu badan ee ku dhaca naasaha haweenka. Xanuunkan si looga hor tago waxaa jira habab fudud oo qofku samayn karo. Kuwaas oo dhammaantood la xidhiidha hab nolol maalmeedkiisa.
Cunto dheelli-tiran: markasta oo qofku qaato cunto dheellitiran waxa uu k badbaadayaa xanuuno badan. Waxaa dhismaaya difaaca jidhkiisa. Jidhkuna waxa uu awood u yeelanayaa inuu iska difaaco xanuuno badan. Marka uu qofku qaato cuntooyinka u badan khudaarta iyo noocyada borotiinku ku badan yahay. Waxaa suurogal ah in jidhka la dagaalamo xanuuno khatara.
Jooji Khamrada: haddii gabadhu ay cabto noocyda khamarada waxay 20% khatar ugu jirtaa in ay qaadoo kansarka naasaha ku dhaca.
Qiijinta sigaarka: qiijinta sigaarku waxay xidhiidh weyn la leedahay kansrka naasaha ku dhaca, gaar ahaan, haween da’da yar ee aan gaadhin xaaladdii ay caadada ku waayi lahaayeen.
Kale fogeeyaha: daawada loo isticmaalo kale fogeeyaha waxay xidhiidh toosa la leedahay kansarka naasaha ku dhaca. Sidaas oo ay tahay gabadha waxaa ku waajiba marka ay qaadanayso daawada kale fogeeyaha in ay la tashato dhakhtarka.
Jimicsiga: maalinkii in uu qofku sameeyo jimicsi waxay keenaysaa in jidhkiisu ka hor tago xanuuno badan.